::ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏::: 2008
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, October 16, 2008 43 comment
ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးတို့အား သိ၍ ဖြစ်စေ မသိ၍ဖြစ်စေ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ တို့ဖြင့် ပြစ်မှားခဲ့လျှင်၊ ကျေးဇူးကန်းခြင်းရှိခဲ့လျှင် ၊ ကျေးဇူးချေဖျက်ခြင်းရှိခဲ့လျှင်၊ ကျေးဇူးမေ့လျှော့ခြင်းရှိခဲ့လျှင်၊ ကျေးဇူးမဲ့စွာ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်း ကြံစည်ပြုမူပြောဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းရှိခဲ့လျှင် ထိုကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်များကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ…
" သီတင်းကျွတ်အခါသမယ တွင် နတ်ဗြမ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…"
* ဓမ္မဒါန* (from http://www.ashinkumara.com/)
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, October 14, 20080comment
ဒီလို ခွက်ပဲ့လေးနဲ့ ခပ်လာတဲ့
စေတနာ မေတ္တာအပြည့် နဲ့
Posted by ယူဆဂိ at Monday, October 13, 20080comment
"How to wish people luck in many different languages."
De Mazzel en de Brogus
Viel Glück or Alles Gute
Posted by ယူဆဂိ at Sunday, July 20, 20080comment
အဆင်မပြေတာတွေဆက်တိုက်များတတ်တဲ့ အခါ ကျမတို့တွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပုံလေးတစ်ခု က
"ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ" တဲ့...
လူကူးမျဉ်းကျား က ကိုယ်ကူးခါနီးမှ မီးနီသွားတာမျိုး
အရေးကြီးလို့ တက်စီ ငှားစီးခါမှ မီးပွိုင့်တွေမိပြီးပိုကြာတာမျိုး
အိပ်ခန်းတံခါးပိတ်ပြီး ခါမှ အခန်းသော့ကျန်ခဲ့တာမျိုး
စသဖြင့်..အဆင်မပြေတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ တနေ့တည်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်..ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမဆို
စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက် စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဒီ movie လေးက forward mail ကတဆင့်ရလာတာလေးပါ...
ဒီ forward mail ရတဲ့သူရှိသလို မရတဲ့သူလည်းရှိမှာပါ လို့ တွေးပြီး မျှဝေလိုက်တာပါ....
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, June 28, 2008 1 comment
ဖတ်ရတာမမြင်ရရင် ပုံလေး click ပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်..
ဘယ်နေ့ သေမည်မသိနိုင်သောကြောင့် ဘာရယ်မဟုတ်သော သေတမ်းစာလေးတစ်စောင်တော့ ထားခဲ့နိုင်ကြစေရန် အကြံပေးလိုသည့်သဘောပါ..သင့်တွင် ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်ပါ..
အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ပစ်ထားတာ ကြာပြီဖြစ်သော ဘလောက်လေးအား ဖုန်ခါရင်း...
ပို့စ် အသစ်လေးတစ်ခု တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်....
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, June 18, 2008 1 comment
မနက်ဖြန် ငါသေသွားနိုင်တယ်..ငါသေသွားခဲ့ရင် လို့ မည်သူမျှ တကူးတကတွေးမိကြမည်မထင်ပါ..
မနက်ဖြန် အတွက်လုပ်ရန်ရှိသော..ကိစ္စအချို့ တော့ ကြိုတင်တွေးတတ်ကြမည်ဆိုလျှင်မမှားချေ..
လူတချို့ က မနက်ဖြန်အတွက်...
လူတချို့ က သဘက်ခါအတွက်..
လူတချို့ က လာမည့်ရုံးပိတ်ရက်အတွက်..
လူတချို့ က ရှေ့ လ အတွက်...
လူတချို့  က နောက်နှစ်အတွက်... စသဖြင့် ကြိုတင်စီမံကိန်းတွေ ချကြသည်...
မနက်ဖြန် ငါသေသွားမယ်ဆိုရင်...ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းချရန်အတွက်တော့ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်...
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, June 18, 20080comment
အားလုံးစိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, April 17, 2008 1 comment
FROM Life_Work lw, Life_Family lf,Life_Friend lfd, Life_Love ll
DELETE FROM #tmpDelete
DROP table #tmpDelete
Note: If you found any mistake on my script, please let me know. "Welcome any suggestion".
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, February 16, 2008 1 comment
If yearning wereaflower,
I don't want you to adorn it.
If Love wereaflower,
I will always keep it for you.
If meeting wereaflower,
let it be for us forever.
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, February 16, 20080comment
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, February 02, 20082comment
၀မ်းနည်းပူဆွေးသောကရောက်လေ့ရှိကြသည်။မှိုင်တွေငေး လွမ်းဆွေးနေသူတစ်ဦးကို မြင်လျှင်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျနေတာ ဖြစ်မည်ဟုကျနော်တို့ ကောက်ချက်ချတတ် ကြသည်။
သို့သော်စိတ်ဓါတ်ကျရောဂါ အဲရစ်ဝီဗာ၏ ဘ၀ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည့်အခါမှာတော့ အပူရုပ်မဆောင်စေဘဲ သူ့ကိုဘီလူးခေါင်း စွပ်ပေးခဲ့သည်။ ၀ီဗာ တစ်ယောက် တစ်ချိန်လုံးလိုလို ဒေါသူပုန်ထနေခဲ့သည်။ အော်ဟစ်ဆူပူသည်။ နံရံတွေကိုလက်သီးနှင့်ထိုးသည်။ ကြာလာသည့်အခါ သားသမီးတွေက သူ့ကို နားမလည်နိုင်တော့။ အဖေဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒေါသကြီးနေရတာလဲဟုမေးခွန်း ထုတ်လာကြသည်။ သည်မေးခွန်းများ၏အဖြေကိုကားဝီဗာကိုယ်တိုင်ပင်မသိခဲ့။ အကယ်၍သူသည်
၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုများအပြင်းအထန်ခံစားရသည်ဆိုလျှင်တော့ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာဖြစ်မည်ဟု သူ့ကိုယ်သူရိပ်စားမိခဲ့စရာအကြောင်းရှိသည်။ယခုမူကားသူခံစားနေရသည်ကစိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့်
သွားမှပင်ပြန်ဆွဲတင်၍မရ လောက်အောင်ကျနေပြီ ဖြစ်သည့် စိတ်ဓါတ်အမှန်ပေါ်လာခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ ။Wellness Health & Beauty Magizine No 37. January,2008. (Doctor Phay Zaw Oo) ၏ဆောင်းပါးအား စာအမည်း တင်ပေးလိုက်ရပါသည်။
Posted by ယူဆဂိ at Sunday, January 20, 20080comment
ခနိုး ခနဲ့ ဆို ကဲ့ရဲ့ လည်း
Posted by ယူဆဂိ at Sunday, January 13, 20080comment
Wish for all friends
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, January 01, 2008 1 comment
-Wish-If yearning wereaflower,I don't want yo...
Happy New Year 2008 Wish for all friends ...